जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न खोज्दा श्रीमतीले अण्डकोष काटिदिएपछि... | Kendrabindu Nepal Online News
जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न खोज्दा श्रीमतीले अण्डकोष काटिदिएपछि…
११ आश्विन २०७६, शनिबार १६:०२
फौदबहादुर रसाइलीको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा उपचार भइरहेको छ ।
तेह्रथुम । एक महिलाले आफ्नै श्रीमानको अण्डकोष काटिदिएकी छन् । म्याङलुङ नगरपालिका ३ नागदहकी ४५ वर्षीया चन्द्रमाया रसाइलीले ६० वर्षीय श्रीमान फौदबहादुर रसाइलीको अण्डकोष नै काटिदिएकी हुन् । घरायसी विवादका क्रममा बिहीबार श्रीमानको अण्डकोष नै काटिदिएकी हुन् ।
घाइते फौदबहादरको दुवै अण्डकोष बाहिर निस्किएको छ । उनको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा उपचार भइरहेको वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष पदम प्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । श्रीमानको अण्डकोष काट्ने चन्द्रमायालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी नायब उपरिक्षक नविनकिसोर प्रधानले जानकारी दिए । रक्सी सेवन गरेर दुवैजना बारम्बार झगडा गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
रक्सी सेवन गरेर श्रीमतीमाथि जवरजस्ती गर्न खोज्ने जति बेला पनि यौन सम्बन्धको लागि श्रीमतीलाई दवाव दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रसाइलीको परिवारमा कमाउने श्रीमती नै हुन् ।
एकातिर श्रीमतीमाथि कमाइ गरेर परिवार पाल्नुपर्ने दवाव थियो भने अर्कोतिर जतिबेला पनि श्रीमानबाट यौन सम्बन्धका लागि पिरोल्थे । रगत बग्ने समस्याबाट पीडित श्रीमतीमाथि त्यस्तो दवाव दिइरहँदा आवेगमा आएर यस्तो घटना हुन पुगेको वडाअध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘अब श्रीमती छुटेर आएपछि कमाउने उनैले हो । फौदबहादुर त मदिरा सेवन गरेर खाएर हल्लिने मात्र हुन् । छोरा बुहारी, छोरी भए पनि श्रीमान श्रीमती अलग बस्छन् ।’ वडाअध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
अण्डकोष, तेह्रथुम, यौन सम्बन्ध
Prevकविता : ऊर्मी
पुतलीसडकमा युवकमाथि चक्कु प्रहारNext
पुरुषका दुईमध्ये कुन अण्डकोष बढी तातो हुन्छ ?
झाँक्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्न नमान्दा श्रीमानले गरे श्रीमतीको हत्या
प्रेमिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राख्यो तर उमेर नपुग्दा ८ वर्ष जेल सजाय